एक हजार तिर्नुस् सडक कब्जा गर्नुस् !::Nepali News Portal from Nepal
एक हजार तिर्नुस् सडक कब्जा गर्नुस् !
अहिले देशमा कुन व्यबस्था छ भनेर सोध्ने हो भने सारा नेपालीको उत्तर हुन्छ,‘ अहिले नेपालमा लोकतन्त्र छ ।’
हो ,अहिले देशमा संघीय गणतन्त्र नै आइसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा जसले जे गर्छु भन्यो त्यो गर्ने छुट छ । यहाँ कसैलाई केही रोकतोक छैन । अहिले मात्रै नेपालको संविधान २०७२ लाई मान्यो भने पुग्छ । देशमा लोकतन्त्र आएपछि अहिले प्रायःजसो कार्यक्रम सडकमै हुने गरेको छ । स्थानीय तहलाई एक हजार रूपैयाँ कर तिरेपछि सडकमा कार्यक्रम गर्ने अनुमति पाइन्छ । त्यही अनुमतिपत्रकै आधारमा प्रहरी प्रशासनले सडकमा कार्यक्रम गर्नेलाई रोकतोक हैन, पूरै सुरक्षा दिएर कार्यक्रम गर्न सहयोग गर्छ । कति मजाको नियम छ ! कति गजबको कानुन छ ! हामीकहाँ , हैन त ?
अहिले कार्यक्रम गर्न सबैभन्दा सजिलो ठाउँ भनेको सडक भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी,नेपाली कांग्रेस, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालजस्ता दलहरुले कहिले बागलुङ बजारको लोकतान्त्रिकचोक त कहिले हल्लनचोक कुनैबेला समिट चोकको पूरै सडक नै कब्जा गरेर कार्यक्रम गर्ने गरेको कुरा सारा जिल्लाबासीलाइ जानकारी नै छ । प्रहरी प्रशासनलाई थाहा नहुने त कुरै भएन । अहिले लोकतन्त्र आएको बेलामा जसले जहाँ चाह्यो त्यहीँ कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ । हैन भने त्यस्तो लोकतन्त्रको के अर्थ रह्यो हैन त ?
सडक भनेको के हो र केका लागि बनाएको हो भन्ने कुराको सामान्य हेक्का राख्न सक्ने कुनै निकाय नै छैन भने पनि फरक पर्दैन । जसले जे मनलाग्छ त्यही गर्न पाउने कति मजाको गणतन्त्र छ हामीकहाँ ! २४ सै घण्टा खुला रहनुपर्ने सडक, जुन सडकमा सयौं सवारी साधन गुड्नु पर्छ, हजारौं मान्छे हिँडडुल गर्नुपर्छ त्यो सबै सडक अबरोध गरेर कार्यक्रम गर्ने छुट दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपालमा कस्तो खालको सँस्कृति को विकास हुँदै गएको छ ? एउटा कार्यक्रम आयोजना हुँदा सटर भाडामा लिएर व्याापार गर्ने हजारौँ व्यवसायी मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
सबैभन्दा प्रमुख कुरा पैदलयात्रुलाई हिँड्न रोकेर कार्यक्रम गर्न इजाजत दिने निकायलाई एकचोटि सबैले सम्मान गर्न जरुरी छ । किनभने नागरिकको हिँडडुल गर्ने अधिकार खोसेर, पसल भाडामा लिएर बसेका व्यवसायीलाई ब्यापार गर्नबाट बन्चित गरेर कार्यक्रम गर्न अनुमति दिने छुट कहाँबाट पाइयो ? हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मनपरि गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन होला । नेपालमा नहुने भन्ने केही पनि छैन । जसले जे मनलाग्छ त्यहीँ गर्ने छुट छ सँंस्कृति÷पर्व मनाउने नाममा पनि आजकल सडक नै अबरुद्ध हुन्छ युवाहरूले मच्किएर कम्मर हल्लाउँदै नाँचगान गर्दा पनि सडक नै बन्द गरिन्छ । हो, हामीले साँस्कृतिक पर्व मनाउनु पर्छ । मनोरन्जन पनि गर्नुपर्छ तर त्यो मनाउने पनि ठाउँ हुन्छ, मर्यादा हुन्छ होला । यहाँ कसैलाई गाली गर्न खोजेको पनि हैन । कसलाई मनपरि भन्न खोजेको हैन । प्रमुख कुरा सडक अबरोध गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्न खोजेको मात्रै हो ।
नेपालका राष्ट्रिय कलाकार पशुपति शर्माले गाएको गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा नेपाल मै छुट’ भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले देशमा कम्युनिस्टको शक्तिशाली सरकार छ यहीँ बेला देशमा झनझन बेथिति बढेर गएको छ । कुनै कानून नभएकोजस्तो देश भएको छ । जहाँ हे¥यो,त्यहीँ मनपरि चलेको छ । प्रहरी प्रशासन नाम मात्रको भएको छ । जसले नराम्रो गर्छ उसलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा उल्टै त्यस्तैत्यस्तै मान्छे र समुहको संरक्षण गर्ने कामभन्दा अरू भएको पनि देखिँदैन । नेपालीको महान चाड तिहारमा नेपाली सँस्कृति जोगाउन देउसी भैलो सडकमा खेल्दा सडक अबरुद्ध गरेर साँस्कृतिक पर्व मनाउन मिल्दैन भनेर हटाउन सक्ने प्रहरी प्रशासन पूरै सडक कब्जा गरेर दायाँबायाँबाट समेत मान्छे हिँड्न नसक्ने बनाउदा पनि चुपचाप बस्छ । अचम्म यही छ । यही अचम्मबीच बागलुङबासी अहिले आजित भैसकेका छन् । कार्यक्रम गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै सडक कब्जा गरेर कार्यक्रम गर्न मिल्छ ?स्वीकृति दिने निकायले जे चाह्यो त्यही अनुमति दिन मिल्छ ?कस्तो खालको कानुन कस्तो खालको व्यबस्था हो देशको ? जसले जे मनलायो त्यही गर्न पाउने ! जनताले सडकमा हिड्न समेत नपाउने यस्तो प्रबृत्ति कहिले सम्म चल्ने हो त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघसंस्था क्रियाशील भए पनि अहिलेसम्म यसरी सडक पटकपटक अबरोध गरेर कार्यक्रम गर्दा समेत कहीँकतै बोलेको सुनिँदैन । न त अहिलेसम्म कहीँकतै बिज्ञप्ती नै पढ्न पाइएको छ । सबैलाई राजनीतिले गाँजेको छ । कसैले पनि यो सडक कब्जा गरेर कार्यक्रम गर्दा धेरैलाई असहज भएकोबारे बोल्न हिम्मत गरेको छैन । कुरा गणतन्त्रको गर्छौँ तर काम भने सामन्तितन्त्रको हुन्छ ।साँच्चै भाषण गर्ने ठाउँ छैन भने ठाउँ बनाउनेतर्फ सोचाँै । साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने ठाउँ बनाउनेतर्फ सबै लागौँ । तर, सधैँसधैँ सडक कब्जा गर्ने गलत नजिर भने नबसालौँ । सडक कब्जा गर्न लोकतन्त्र ल्याएको अवश्य हैन होला ।अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकार पनि आफ्नो ठाउँमा शक्तिशाली नै छ । अहिलेका दिनसम्म जे जति सडक कब्जा भए भए अबको दिनदेखि सडक पूरै कब्जा गर्ने गरेर कार्यक्रम गर्न सधैँको लागि बन्द गरौँ । हाम्रो बागलुङ ,राम्रो बागलुङ बनाउने अभियान सबै बागलुङबासी जुटौँ ।